October 20, 2020 - Achawlaymyar
အနုပညာအလုပ်ကို ဆက်မလုပ်ဘဲ ရပ်နားခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် နဝရတ်
October 20, 2020 by Achawlaymyar
မငျးသမီး နဝရတျကတော့ အနုပညာအလုပျတကေို ရပျနား ထားခဲ့တာ အခြိနျတျောကွာ ရှိခဲ့ပွီဘဲဖွဈပါတယျနျော။အနုပညာအလုပျကို ရပျနားခဲ့တာကို လုပျခဲ့သမြှလညျးကုနျပွီပေါ့နျော ။ဒီ့ထကျလညျး လုပျပွစရာမရှိတော့ဘူး ။ ကိုယျ့စိတျထဲမှာရော ရငျထဲမှာရော ခန်ဒာကိုယျသှေးသားထဲမှာပါ လုပျတတျတဲ့အရာအကုနျလုံးကို လုပျခဲ့ပွီးပွီ ။အခုကကတြော့ လုပျသငျ့တာနဲ့ လုပျခငျြတာနဲ့ကို လုပျနတေယျ။ ၁၅ နှဈလုံးလုံးကို ကိုယျကပွညျ့ပွညျ့၀၀ပေးပွီးပွီဆိုတော့ အခုခြိနျမှာကိုယျ့အတှကျက အရမျးပြျောတယျ ကနြေပျတယျပေါ့နျော။ ပရိသတျအတှကျက အကုနျလုံးပေးပွီးပွီဆိုတော့ ဒီအခြိနျက ကိုယျ့အတှကျကိုယျ အခုလိုမြိုး ကိုယျ့မိသားစုအတှကျ ကိုယျ့အတှကျ အသုံးခတြယျ အခြိနျပေးရတယျ Balance ညီမြှတယျပေါ့နျော ဆိုပွီးပွောခဲ့တာပါ။သူမရဲ့ အနုပညာကို ပရျတျသတျတကေ အသိမှတျမပွုခံရဘူးဆိုတာကိုလညျး ကိုယျ့ပရိသတျအသိအမှတျပွုရငျပွီးတာပဲ အနကျရှိုငျးဆုံးရောကျနတေယျလို့ ယုံကွညျတယျ။ လကျခံတယျ ပရိသတျက ကိုယျ့ကိုခဈြတယျဆိုရငျ ကနြေပျပါတယျ ဆိုပွီးပွောတာပါ။အနုပညာ အလုပျကို စိတျကုနျသှားတယျ ဆိုတဲ့ပျေါမှာ အဲ့ဒါကတော့ရှိပါတယျ။စိတျကုနျသှားတယျ။ စိတျပကျြသှားတယျ … Read more
ယောကျြားလေးတှလေုံးဝထုတျပွောမှာမဟုတျတဲ့ သူတို့စိတျထဲက အမှနျတရား(၇)ခု
အမြန်လမ်း ၃၃၆ မိုင်မှာ တမင်သက်သက် လုပ်ထားတဲ့ အန္တရာယ်ထောင်ချောက် (အားလုံး သတိထားကြပါ)
အမြန်လမ်း ၃၃၆ မိုင်မှာ တမင်သက်သက် လုပ်ထားတဲ့ အန္တရာယ်ထောင်ချောက် (အားလုံး သတိထားကြပါ) အမြန်လမ်း ၃၃၆မိုင်မှာ ကြသောင်းဝါး တလုံး လမ်းပေါ်မှာတွေ့လို့ ကားရပ်ပြီး ဖယ်ရှားတော့မှ အန္တရာယ် ထောင်ချောက် ဖြစ်နေမှန်း သိရတယ်။ ဝါးလုံးကို ကားပေါ်က ဆင်းပြီး ဖယ်တော့မှ ဝါးလုံး တလုံးလုံးကို အစအဆုံး အင်ဂျင်ဝိုင်တွေ ရွှဲနစ်နေအောင် သုတ်ထားပြီး ဝါးတဖက်မှာ သွတ်နန်းကြိုးနဲ့ ချည်နှောင်ထားတယ်။ တမင်တကာ ကား လမ်းချော်ပြီး စလစ်ဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သတိရှိကြပါရန်။ Ashin Eaindawuntha unicode, အမွနျလမျး ၃၃၆ မိုငျမှာ တမငျသကျသကျ လုပျထားတဲ့ အန်တရာယျထောငျခြောကျ (အားလုံး သတိထားကွပါ) အမွနျလမျး ၃၃၆မိုငျမှာ ကွသောငျးဝါး တလုံး … Read more
ကျေးဇူးပြုပီးသင်သိသောအမျိုးသမီးများကိုမျှဝေပေးပါ(သင် သည် အမျိုးသားတစ်ယောက် ဆိုပါကယခု အကြောင်းရာအားအမျိုးသမီးများအတွက် မျှဝေပေးပါ) အမျိုးသမီးများရာသီကာလ အတွင်းအောက်ပါအချက် များမလုပ်သင့်ပါ ဒါတေကတော့ ၁။ ရာသီချိန်ကာလအတွင်း ရေခဲရေ ၊ဆိုဒါ မသောက် သုံးသင့်သလို အုန်းသီးလဲ မစားသင့်ပါ သုတေသီများ၏လေ့လာချက် များအရ ရာသီကာလအတွင်းရေခဲရေသောက် သုံးးခြင်းသည်သားအိမ်တွင်းကျန်ရှိနေသောရာသီသွေးကိုခဲစေတက်ပီး ၅နှစ် မှ ၁၀ နှစ် အတွင်းအကြိမ်ရေများလာသည့်အခါသားအိမ်ကင်ဆာအကျိတ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၂။ အမျိုးသမီးများရာသီချိန်ကာလအတွင်း ခေါင်းလျှော်ခြင်းမပြုသင့်ပါ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရာသီချိန်ကာလအတွင်း ဦးခေါင်း၏ချွေးပေါက်ငယ် လေးများပွင့်နေတက် ပြီးခေါင်းလျှော် လိုက် ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုကျယ် သွားစေကာ ဦးခေါင်းအတွင်းပိုင်းကို လေတိုက်ရိုက် သက်ေ ရာက် စေခြင်းကြောင့် ဦးခေါင်းကိုက် ခဲခြင်းကို ဖြစ်စေတက် ပါတယ် ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် အရမ်းအန္တရယ် များပီး ငယ်ရွယ်စဉ်မှာမသိသာသော်လဲ ကြီးလာသည့်အခါ မှာပိုမိုခံစားရပါတယ် ၃။ ရာသီကာလအတွင်းသခွားသီးမစားသင့်ပါ ဘာဖြစ်လို့လဲ … Read more
လမ်းဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ နုနုထွားထွား အပျိုပေါက်မလေးတွေကို ငမ်းချင်နေတဲ့ အဖိုးကြီးကို လှလှပပ ပညာပြလိုက်တဲ့အဖွားအို
လမ်းဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ နုနုထွားထွား အပျိုပေါက်မလေးတွေကို ငမ်းချင်နေတဲ့ အဖိုးကြီးကို လှလှပပ ပညာပြလိုက်တဲ့အဖွားအို အသက်၇၀ ကျော် အဖိုးကြီးက သူ့ရဲ့ချစ်ဇနီးကိုအချစ်စမ်းကြည့်မယ်သွေးတိုးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ လမ်းဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ နုနုထွားထွား အပျိုပေါက်မလေးကို ငေးမောရင်း သူ့ ချစ်ဇနီးကို မေးတယ် ငါ ကောင်မလေးတွေကို ကြည့်ရင် မင်းသဝန်မတိုဘူးလား ? ဇနီးသည် အဖြေက တိုရှင်း လိုရင်းပဲ ။No not at all !လုံးဝ လုံးဝ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ။ Why ? လမ်း​ဖြတ်သွားတာမြင်တိုင်း ဇွတ်အတင်းလိုက်ဟောင်နေတဲ့ ခွေးတွေလို ပြေးလိုက်လို့လဲမမှီနှိုင်ကိုက်လည်း ​မကိုက်နှိုင် မှီလည်းမမှီနှိုင် ဟောင်လို့ နားငြီးတာပဲရှိတာ ဘာသဝန်တိုစရာရှိလဲ ? ဘာမှာမစွမ်းဆောင်နှိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်မှ ဖြစ်ခြင်တာတွေရှေ့တန်းတင် သူဘဲငါဘဲလက်ရုံးတန်းနေလည်းအပိုဘဲလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့…… 😁😁 မှတ်ကရောပဲ Crd: လမျးဖွတျလြှောကျသှားတဲ့ … Read more
အမျိုးသမီးတွေမှာပဲ တွေ့နိုင်မယ့် နှလုံးရောဂါနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ လက္ခဏာရပ်(၆) ခု
အမြိုးသမီးတှမှောပဲ တှနေို့ငျမယျ့ နှလုံးရောဂါနဲ့ ပတျသတျတဲ့ လက်ခဏာရပျ(၆) ခု နှလုံးရောဂါဆိုတာ ကြား၊ မမရှေး အသကျအရှယျမရှေး ဖွဈပှားတတျတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတဈခုပါ။ အခနျ့မသငျ့ရငျ အသကျအန်တရာယျဆုံးရှုံးသှားနိုငျတာကွောငျ့ မပေါ့ဆသငျ့တဲ့ရောဂါတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ အမြိုးသမီးတှအေတှကျ သီးသနျ့ နှလုံးရောဂါနဲ့ ပတျသကျတဲ့လက်ခဏာရပျတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့.. (၁) ခန်ဓာကိုယျအနှံ့နာကငျြမှုတှေ ကြောဖကျ၊ လညျပငျးနဲ့ဂုတျ၊ မေးရိုးတဈလြှောကျအပွငျ လကျမောငျးနှဈဖကျမှာပါ ရုတျတရကျစူးစူးဝါးဝါးနာကငျြခံစားလာရပါလိမျ့မယျ။ တဈခါတဈလကေရြငျ ညအိပျနရေငျး နာလာလို့ လနျ့နိုးတာမြိုးတောငျရှိတတျပါတယျ။ ဒီလိုဆိုရငျ ဆရာဝနျနဲ့ အမွနျဆုံး သှားရောကျပွသသငျ့နပေါပွီ။ (၂) ဗိုကျမကောငျးတာမြိုး အစာအဆိပျသငျ့သလိုလို၊ အပူအစပျစားတာမြားလို့ ဗိုကျအောငျ့သလို ဖွဈနပေမေယျ့လို့ ဗိုကျတဈဝှကျမှာ ဖိအားကွီးတဈခုလို ခံစားနရေပွီးတော့ ခပျစူးစူးအောငျ့နမေယျဆိုရငျ အစာအိမျအခဉျြပေါကျနတော ဖွဈနိုငျသလို နှလုံးရောဂါလညျးဖွဈနိုငျတဲ့အှကျေကွောငျ့ မပေါ့သငျ့ပါဘူး။ အမွနျဆုံး သှားရောကျစဈဆေးပါ။ (၃) ခြှေးစထှေကျတာ … Read more
နောက်တပတ် သောကြာနေ့မှာ ကြည့်ရတော့မယ့် အောင်လနဲ့စိန်ခေါ်သူ REINIER တို့ ပွဲ
ဘရာဇီးတိုကျခိုကျရေးသမားကို အနိုငျယူခဲ့တဲ့ ဒတျချလြူမြိုး တိုကျခိုကျရေးသမား Reinier က အောငျလအနျဆနျရဲ့ ONE မဈဒယျဝိတျ ခနျြပီယံခါးပတျကို စိနျချေါခဲ့တာပါ “အောငျလ မငျး အဆငျသငျ့ပဲလား” ကွိုကျတဲ့နရောအခြိနျရှေးလိုကျစမျးပါ ပွောငျပွောငျ လကျလကျခါးပတျ ကိုတော့ သိမျးထား ငါလာယူမှာမို့လို့” ဆိုပွီး Reinier က အောငျလကို စငျပျေါကနေ စိနျချေါခဲ့တာပါ။ “ကြှနျတျော့ရဲ့ခနျြပီယံခါးပတျကို စိနျချေါနိုငျဖို့အတှကျ ယှဉျပွိုငျ ထိုးသတျရတဲ့အရေးကွီးတဲ့ပှဲစဉျမှာ အနိုငျရရှိသှားတဲ့ Reiner ကို ဂုဏျပွုပါတယျ။ သိပျမကွာခငျ အခြိနျမှာခနျြပီယံခါးပတျအတှကျ ကွိုးဝိုငျးမှာ ရငျဆိုငျထိုးသတျဖို့ အတှကျ မြှျောလငျ့ပါတယျ”လို့ အောငျလက သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာ မကျြနှာကနတေုံ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။ Reinier ဟာ အသကျ ၃၀ ရှိနပွေီး အရပျ ၆ ပေ ၄ လကျမ၊ ကိုယျအလေး ခြိနျ … Read more
မန်တလေး UAB BANK လုယကျမှုကြူးလှနျသူ ကွိုးဆှဲခြ မဆုံးခငျ နောကျဆုံးရေးခဲ့တဲ့ သှေးနဲ့ရေးတဲ့စာ…
“နောက်ဘ၀လူကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်”ဟုသွေးစာရေးကာသတ်သေသူမှာဘဏ်လုယက်မှုကျူးလွန်သူဖြစ်နေ အမှုဖြစ်စဉ်မှာ၁၇.၁၀.၂၀၂၀ရက်နံနက်၁၁နာရီ၁၀မိနစ်အချိန်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊အောင်ပင်လယ်နယ်မြေရဲစခန်းတွင်ရဲအုပ်စိန်ထွန်းဦးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ဒုရဲအုပ်သဉ္ဇာထွေး၎င်းသည်၁၇.၁၀.၂၀၂၀ရက်၇နာရီခွဲအချိန်ခန့်တွင်ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊အောင်သာယာရပ်ကွက်၁၁၆(ဂန္ဓာမာ) • ၁၁၇(ယုဇန)လမ်း၊ ၄၄ လမ်းအနောက်ဘက်၌အမျိုးသားတစ်ဦးကြိုးဆွဲချသေဆုံး နေကြောင်း သတင်းအရ စခန်းမှူးရဲအုပ် စိန်ထွန်းနယ်ထိန်းအရာရှိဒုရဲအုပ်ဝင်းပိုင်ရဲဒုတပ်ကြပ်ပြည့်ဖြိုးအောင်၊သက်သေအောင်သာယာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ဦးအောင်ကျော်နိုင်(ရာအိမ်မှူးဦးမြင့်သန်းဦးသန်းဝင်းတို့နှင့်အတူသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ သေဆုံးသူမှာ မောင်အောင်ကျော်ထွန်း (၃၂)နှစ်၊ညည၇၆/၁၀သင်ပုန်းကုန်းရပ်ကွက်၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်နေသူဖြစ်ပြီးအောင်သာယာရပ်ကွက်၊၁၁၆(ဂန္ဓမာ)•၁၁၇(ယုဇန)လမ်း၊၄လမ်းအနောက်ရှိခြံဝန်းအလွတ်ရှိအုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုးတွင်သွပ်နန်းကြိုးအားကြိုးအဖြင့်အသုံးပြု၍ကြီးလွဲချသေဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့် သေဆုံးအလောင်၏အနီးဝန်းကျင်အားသက်သေများနှင့်အတူစိစစ်ရာအောင်သမာဓိတံဆိပ်ပါဗလာစာအုပ်အတွင်း၌ဘလိတ်ဓား(၁)ချောင်းနှင့် သွေးများ၊ ဖြင့် ရေးသားသည့်” ကျုပ်ကို ခိုင်းလို့လုပ်တာ၊ ပိုက်ဆံ လည်းကျုပ်မရဘူး၊ဒါမိသားစုနှင့်မဆိုင်ဘူး၊နောင်ဘ၀မှာလူကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်”ဟုသောစာသားများတွေ့ရကာ၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်အားစစ်ဆေးခဲ့ရာ လျာအနည်းငယ်ထွက်ခြင်း၊လိင်တံမှသုတ်ရည်များထွက်ခြင်း၊ဝဲဘက်လက်ခုံမှသွေးများထွက်နေခြင်း၊လည်ပင်း၌ သွပ်နန်းကြီုးအရာများသာတွေ့ရပြီး အခြားပြင်ပဒဏ်ရာများမရှိတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့်၎င်းသေဆုံးသူအလောင်းအားရဲဆေးစာရေးသား၍မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့တင်ပို့ခဲ့ရာPR(11/2020)ဖြင့်လက်ခံခဲ့ပြီးအောင်ကျော်ထွန်းရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍မ္မတာအတိုင်းသေဆုံးခြင်း ဟုတ်/မဟုတ် စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ဒုအုပ် သဉ္ဇာထွေးမှတရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းခဲ့ရာအောင်ပင်လယ်နယ်မြေရဲစခန်းသေမှုသေခင်းအမှတ်(၆/၂၀၂၀)နှင့်အမှုရေးဖွင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟုဆို၏။ ရဲစခန်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ခဲ့ရာမှသေဆုံးသူအောင်ကျော်ထွန်းမှာလွန်ခဲ့သော၁၅.၁၀.၂၀၂၀ရက်နေ့နေ့လည်၃နာရီခွဲခန့်အချိန်တွင်မန္တလေးမြို့၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊၆၂လမ်းနှင့်ရတနာလမ်းထောင့်ရှိယူအေဘီဘဏ်အတွင်းသို့ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ဆောင်း၍Maskတပ်ဆင်လျက်အမျိုးသားတစ်ဦး ဝင်ရောက်လာပြီး လုံခြုံရေးနှင့်ဘဏ်ဝန်ထမ်း များအားသေနတ်အတို(စိစစ်ဆဲ)ဖြင့်ချိန်ရွယ်၍ငွေကျပ်သိန်း၂၀၀လုယက်ယူဆောင်ပြီး4D-5422MarkIIအဖြူရောင်ယာဉ်ဖြင့်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်လျှင်ဖြစ်ခြင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ အသုံးပြုခဲ့သည့် 4D-5422 Mark II အဖြူရောင်ယာဉ်ကို ကားအတွင်း ထိုင်ခုံများအား ဓါတ်ဆီလောင်းမီးရှို့ထားပြီးပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊(ခ)ရပ်ကွက်အတွင်းရှိဒူးကြားလမ်းပေါ်တွင်ယင်းနေ့ညနေပိုင်းတွင်တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်၍စိစစ်ခဲ့ရာ၎င်းယာဉ်သည်လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်ဖြစ်ကြောင်း၊ယာဉ်အတွင်းရှာဖွေရာလေသေနတ်တွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုသည့်ဘောစေ့များနှင့်ယာဉ်ဒက်ရ်ှဘုတ်ပေါ်၌ “ကားရွှေ့လိုလျှင် ၀၉၆၇…….”ဟု ရေးထားသည့် စာရွက်တစ်ရွက်တွေ့ရကြောင်း၊ ယင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုစိစစ်ရာဖုန်းမှတ်ပုံတင်ထားသူမှာ အောင်ကျော်ထွန်း၊၊ရွှေဘိုမြို့နေသူ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်စုံစမ်းခဲ့ရာယင်းမှတ်ပုံတင်ကိုင်ဆောင်သူသည်လွန်ခဲ့သည့်၁၀နှစ်ခန့်ကတည်းကမန္တလေးမြို့သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သည်ကိုစုံစမ်းရရှိကြောင်း၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကိုအခြေခံ၍ဆက်လက်စုံစမ်းခဲ့ရာအောင်ကျော်ထွန်းသည်မန္တလေးမြို့၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊သင်ပန်းကုန်းရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်ကြောင်းအတည်ပြုရရှိ၍၎င်း၏နေအိမ်သို့၁၆.၁၀.၂၀၂၀ရက်နေ့ညတွင်စောင့်ကြည့်စိစစ်ရာထူးခြားလှုပ်ရှားမှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိကြောင်း၊ … Read more
မာနတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး စေတနာချင်း ပြိုင်ကြည့်ပါလား
မာနတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး စေတနာချင်း ပြိုင်ကြည့်ပါလား မာနတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး စေတနာချင်း ပြိုင်ကြည့်ပါလား။ အလှတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး စိတ်ထားချင်း ပြိုင်ကြည့်ပါလား။ ပိုင်ဆိုင်မှူတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး အေးချမ်းမှူကို ပြိုင်ကြပါလား။ ပညာတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး လူသားကောင်းကျိုးကို အတူတူလုပ်ကြည့်ပါလား။ ကျော်ကြားမှူတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး နိူင်ငံ နှင့် အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက် ကြိုးစားကြည့်ပါလား။ ဂုဏ်ပကာသနတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး ဆင်းရဲသားတွေကို ဝိုင်းဝန်းပေးကမ်းကြပါလား။ လောဘတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး နိမ့်ကျနေသူတွေရဲ့ ဘဝကို မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါလား။ အမြင်မတူညီမှူတွေကို ငြင်းခုံနေမှာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး သူ့အတွေး ကိုယ့်အတွေးကို ညှိကြည့်ပါလား။ အတ္တတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး ကြားထဲက မြေစာပင်လေးတွေကို သနားကြည့်ပါလား။ … Read more